Isimuphinda Isibili i-Covid-19 owesimame waseThekwini – Journalismiziko
Home›News›Isimuphinda Isibili i-Covid-19 owesimame waseThekwini
Udokotela Youvan Maharaj usebike ukuthi unesiguli esesitheleleke nge Covid-19 okwesibili emva kwezinyanga ezintathu satheleleka ngaleligciwane okukuqala.
U-Dr Maharaj utshele abezindaba i-The Witness ukuthi lesisiguli saqala ukuthola leligciwane mhla ziyi -9 kuNdasa sibe sesiphinda sithatha ama- test emva kwamaviki amabili kwatholakala imiphumela e-negative, kuthe mhla ziyi 14 kuNtulikazi kube sekutholakala imiphumela e-positive.
“Wangifonela ngo Ndasa esola ukuthi ngathi usethole lesifo i-Covid-19 emveni kokubuya ohambeni lwakhe eNyakatho neMelika, wathi uzizwa enezimpawu ezithi azifane nezegciwane i-Covid-19,” Kuchaza u Dr Maharaj.
Ube eseqhubeka esho uMaharaj ukuthi wamubonisa lona wesifazane ukuthi akayohlolela leligciwane, nangempela imiphumela yabuya ithi unalo.
Ngokusho kuka Dr Maharaj kwaba inhlanhla wakwazi ukuzivalela lona wesifazane, “Ngamnika imishanguzo yokuqinisa i-immune system yakhe kanye neyokulapha izimpawu. Emveni kwezi nsuku eziyi-14 wayesengcono, ngathi akaphinde ayohlola yaphuma i-negative imiphumela.” Kusho uDr Maharaj.
Lona wesifazane wabe esebuyela emsebenzini kwaze kwaba i-10 kuNtulikazi, laphoke wabe eseshayela khona udokotela Maharaj esho ukuthi abalingani bakhe bahlolele igciwane i-Coronavirus base bethola imiphumela e-positive naye usezwa izimpawu futhi.
“Ngibesengithi akathathe enye i-test ngase ngithola imiphumela e- positive mhla ziyi-14 kuNtulikazi” kwengeza uMaharaj.
U-Maharaj uthi okumthusa kakhulu ukucabanga ngalesisimo kuleli lase Ningizimu Africa uphinde wathi futhi kungenzeka ukuthi isigameko sokuqala lesi kuleli lapho isiguli sitheleleka kabili kulandelana ilesisifo, nokuphinde kwaba esinye sezizathu esimenze athinte i-National Instituete of Communicable Diseases (NICD) okwiyona esiqhaphe loludaba.
U-Maharaj uthi emveni kokubhunga nabanye ochwepheshe kwezokwelapha ngaloludaba ufisa abantu behlise umoya njengoba kumele bekulungiselele ukubhekana nezigameko ezifana nalezi.
U-Professor Lynn Morris oyi-Executive Director ye-NICD ekhuluma ne- News24 uthe ngeshwa alwanele ulwazi ukufundisa ngobucayi balesimo. Uthi ukungatheleleki kulele ekutheni umzimba ukwazi ukuthuthukisa ama -neutralising antibodies, wathi lokhu kuthuthukisa i-viral infection kanye nomgomo bese kuphinda kuvikela ukutheleleka kabusha.
Uqhubeke wathi njengoba lesifo sisisha asibanga khona isikhathi sokufunda kabanzi ngaso.
“Lokhu kubalulekile ukuthi sikuqonde nge -Covid-19 mancane amathuba okuthi ibekhona minyaka yonke njengemikhuhlane ejwayelekile.” Kusho u-professor Morris.
AMABHOKOBHOKO will not be playing due to ...